သင်ကစမတ်ဖုန်းစွဲတွေကိုဖယ်ရှားဖို့တဲ့ကိုကူညီပါနိုင်သလားဒါက Apps ကပ
ပင်မစာမျက်နှာ » ဘ‌‌လော့ခ် » သင်ကစမတ်ဖုန်းစွဲတွေကိုဖယ်ရှားဖို့တဲ့ကိုကူညီပါနိုင်သလားဒါက Apps ကပ
သင်ကစမတ်ဖုန်းစွဲ APK ကိုဖယ်ရှားပစ်တဲ့ကိုကူညီပါနိုင်သလားဒါက Apps ကပ
သင်သည်သင်၏စမတ်ဖုန်းစွဲဖြစ်ပါသလား သငျသညျမှန်လျှင်, အခွင့်အလမ်းတွေကိုသင့်ရဲ့ကုန်ထုတ်စွမ်းအားထိခိုက်ယူပြီးကြောင်းဖြစ်ကြသည်။ အလုပ်လုပ်နေစဉ်အတွင်းစမတ်ဖုန်းအလွန်ကြီးစွာသောတီထွင်မှုများနှင့်အလွန်အသုံးဝင်နေစဉ်, သူတို့နည်းနည်းအားထုတ်မှုနှင့်အတူအလုပ်ကနေသင်တို့ကိုအာရုံနိုငျပါသညျ! သင့်ရဲ့စွဲကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့ရတဲ့၌သင်တို့ကိုအထိရောက်ဆုံး apps များအချို့ကိုကြည့်ကြရအောင်။
Antisocial: ဒီ app အနည်းငယ်သာဘက်ထရီများနှင့်ဒေတာများကိုအသုံးပြုသည်နှင့်နောက်ခံပြေး။ ဒါဟာအသုံးပြုသူပိတ်ပင်တားဆီးမှု apps များသို့မဟုတ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမကူညီဘူး။ ဒါဟာသင်ပြန်ဖြတ်ဖို့လိုအပ်ဘယ်လောက်တစ်ခုစိတ်ကူးပေးဖို့စံပြအသုံးပြုမှုရန်သင့်ပါသည်နှိုင်းယှဉ်တစ်ဦးရည်မှန်းချက်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့အလေ့အကျင့်များနှင့်အသုံးပြုမှု၏ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ပုံတစ်ပုံကိုရဖို့ပဲအကြောင်းကိုနှစ်ပတ်အတွင်းယူပါလိမ့်မယ်။
သစ်တော: အဆိုပါ app ကိုသင်၏ဖုန်းအသုံးပြုနေစဉ်သင့်ရဲ့ဖုန်းကို အသုံးပြု. ထံမှသင်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ရန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အယူအဆရှိပါတယ်! သင် app ကိုဖွင့်လှစ်တဲ့အခါမှာ, သင်ပထမဦးဆုံးတစ်ဦးပင်ပျိုစိုက်ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။ ဒါဟာနေသမျှကာလပတ်လုံးသင် app ကိုအပေါ်ဖြစ်ကြသည်အဖြစ်ကြီးထွားလာစောင့်ရှောက်မည်။ သင် app ကိုပိတ်ပြီးတဲ့အခါမှာ, သင်စိုက်သောအပင်၏အသီးအသတ်ခံရလိမ့်မည်။
App ကို detox: ဒီ app ကိုအသုံးပြုသူ, apps များသော့ခတ်အသုံးပြုမှုကန့်သတ်ရန်နှင့်ပင်အခြိနျဆှဲသငျ့အလေ့အထတစ်ခုရပ်တန့်ထားရန်စွမ်းရည်ကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒီ app ကိုလည်းသူတို့ရဲ့ကလေးတွေ '' အသုံးပြုမှုစောင့်ကြည့်ဖို့မိဘများကအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သင်သည်သင်၏လိုအပ်ချက်နှင့်အညီသင့်မိုဘိုင်းအသုံးပြုမှုကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်အလုပ်လုပ်ကြသောအခါသင်တို့ကိုအာရုံစူးစိုက်ပါစေနှငျ့သငျအခမဲ့အခါသင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာအချိန်ပျော်မွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ပြန်ဖွင့် Outlook နဲ့နဲ့ Gmail ကိုစောင့်ရှောက်စဉ်ကိုလည်းသင်က Facebook နဲ့တူ apps များကန့်သတ်ရန်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်းတစ်ခုမှာကောင်းသောအရာ setting များကိုအလွန်အမင်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သောအချက်ဖြစ်ပါသည်။
Flipd: ဒီ app ကိုသာ Android မှာအသုံးပြုသူများအတွက်လက်ရှိရရှိနိုင်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့တစ်ဦးက iOS version ကိုမကြာမီဖြန့်ချိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ Flipd လုံးဝသင့်ရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ် detox ၏တာဝန်ခံကြာပါသည်။ ဒါဟာအခြေခံတစ်ခုခုရန်သင့်သော့ခတ်မျက်နှာပြင်ပြောင်းလဲနှင့်သင်ချက်ချင်းမက်ဆေ့ခ်ျမှ Auto-ပြန်ကြားချက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်းအရေးပေါ်အဆက်အသွယ်များစာရင်းကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်းဤကဲ့သို့သောသင့်ရဲ့ကလေးတွေ '' ဖုန်းများကဲ့သို့အခြားဖုန်းများ, သော့ခတ်ခြင်းနှင့်စောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ သင်တို့သည်ဤမျှပေါ်စာသင်ခန်းထဲမှာသင့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်, အားကစားရုံကိုအသုံးပြုရန်နှင့်နိုင်ပါတယ်။
လွတ်လပ်ရေး: ဒီက iOS အသုံးပြုသူများကသာရရှိနိုင်သည်။ ဒါဟာတင်းကျပ်နှင့်အဲဒါကတစ်ခုခုလိုအပျသူအမာခံအသုံးပြုသူများအတွက်စုံလင်သည်။ ဤအတူသင်အဆက်မပြတ်သွားရောက်ကြည့်ရှုကြောင်းဆိုဒ်များပိတ်ဆို့နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျအခြို့ကာလအဘို့ထိုသူတို့ပိတ်ဆို့သို့မဟုတ်သင်ကိုယ်တိုင်သူတို့ကိုပိတ်ဆို့ထားတာတွေကိုဖွမရောက်မှီတိုင်အောင်ပိတ်ဆို့သူတို့ကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။
တခဏ: ဒီကသင်၏နေ့စဉ်မျက်နှာပြင်အသုံးပြုမှုတစ်ဦးအချိန်ဇယားဖန်တီးပေးပါတယ်။ သငျသညျယခုသင်အကြိမ်အရေအတွက်ကသင်ကတက်ခူးကြနဲ့သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သို့မဟုတ်မတွေ့ဆုံခဲ့ကြလျှင်, သင်၏မျက်နှာပြင်လျှက်ရှိကြောင်းသုံးစွဲထားသောမိနစ်ကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်။ သင်သင့်ရဲ့ device ကို အသုံးပြု. မရသို့မကျေမနပ်ရဤမျှလောက်များစွာသောသတိပေးချက်အရလိမ့်မယ်တဲ့အင်္ဂါရပ်ရှိပါသည်! တောက်ပ!
Offtime: သင်မယ့်အစားတိုင်းအဆက်အသွယ်ဘို့တသွားလာရင်းအတွက်လုပ်နေတာ၏, တိကျတဲ့ profile များကိုထံမှ profile များကိုနှင့်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုဖုန်းခေါ်ဆိုမှု, စာသားများနှင့်သတိပေးချက်များဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ သင် VIP အဆက်အသွယ်အဖြစ်စာရင်းသွင်းခဲ့ကြသူတွေကိုထံမှဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့်သတိပေးချက်များလက်ခံရရှိရန်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ အပြင်ဒီကနေ, သင်လည်းသင့်ရဲ့အင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့်ယေဘုယျဖုန်းကိုလှုပ်ရှားမှုကန့်သတ်နိုင်ပါတယ်။ သင်ပိုမိုပြုလုပ်စတင်သုံးစွဲလျှင်, သင်အသိပေးချက်များကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ သင့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့အသုံးပြုမှုရှင်းရှင်းလင်းလင်းအုပ်ကြွပ်နှင့်ဇယား၌သငျဖို့တင်ပြကြပါတယ်။ သင်အပေါ်အလုပ်မလုပ်နိုင်အောင်လည်းသင့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုအကြောင်းသင့်အကြောင်းကြား။